Maqaa fi Mallattooleen Naannoo Amaaraa Keessaa Eenyummaa Uummatichaa Hin Mul’isne Jijjiiramuu Qaba: Bulchiisa Naannoo Amaaraa
Muddee 22, 2020
Faayilii - Magaala Baahir Daar
Naannoo Amaaraa magaalaa Baahirdaar keessatti mooraa siidaa wareegamtootaa jedhamee waamamu keessatti eenyummaa uummata naannoo kan bakka hin buune jedhamuun siidaan amanamu hooggana naannoo ol aanaa dhaan akka achii kaafamu waan murtaa’eef sambata darbe kaafamuun paartiin badhaadhina naannoo Amaaraa beeksisee jira.
Paartiin badhaadhina naannoo sanaa jijjiirama kanaan uummatichaaf waadaa kan seene keessaa seenaa dogoggoraa sirreessuu kan jedhutu keessatti argama. Akkuma kanaan torban kana magaalaa Baahir Daar keessa uummaticha kan bakka hin buuneef hin ibsine kan jedhaman mallattoolee fi maqaa jijjiiruuf sochiin jalqabamuu isaa itti gaafatamaan damee humna namaa fi faayinaansii kan paartii badhaadhinaa obbo Geetinnet Aayicheew ibsaniiru.
Siidaa wareegamtoota uummattoota Amaaraa moggaasa jedhu irraa jalqabee jijjiiruuf qorannaan geggeessamaa jiraachuus ibsaniiru. Buufati xayyaara Baahir Daar kan Caamsaa 20 jedhamuun waamamaa ture buufata xayyaara Dej Azmaachi Belaay Zallaqaa jedhamee akka waamamu koreen waajjirri bulchiinsa kantiibaa magaalaa Baahir Daar torban darbe murteessuun isaa ni yaadatama jechuun Aster Misgaanaaw gabaasteetti.
UNHCR fi Michoonni Isaa Baqattoota Walitti Bu’iinsa Tigraay Jalaa Dheessan Gargaaruuf Deggrsa Doolaara Miliyoona $156 Gaafate
Maanajerii Arsenal, Mikel Arteta kilabiin isaa barana dorgommiin guddoo yarattullee biraa hin deemu
Itoophiyaan Saataalaayitii Hawaatti Erguuf Karoorfatte
Mootummaan Itiyoophiyaa Tigraay Keessatti Dullii Waraanaa Gaggeesse Seera Qabeessa: Musaa Faakii
Angawoonni Itiyoophiyaa Gaazexxeessaa Daawwiit Kabbadaa Haal Duree Tokko Malee Hiikaa: CPJ
Ertraan Sababa Koronaan Sochii Jiru Ugguruuf Jirti